K 7 (ICyclobenzaprine Hydrochloride 10 mg)
Ipilisi eprintiweyo K 7 I-Yellow, ejikelezileyo kwaye ichongiwe njengeCyclobenzaprine Hydrochloride 10 mg. Inikwa yi-KVK Tech, Inc.
ICyclobenzaprine isetyenziselwa unyango lwe yesciatica ; Ukudumba kwezihlunu kwaye ikudidi lweziyobisi izihlunu zezihlunu zamathambo . Akukho bungozi buqinisekisiweyo ebantwini ngexesha lokukhulelwa. I-cyclobenzaprine 10 mg ayisiyonto ilawulwayo phantsi komThetho weZinto eziLawulwayo (CSA).
Imifanekiso yeK 7
Imbuyekezo KVK Tech, Inc.
I-lactose monohydrate , cellulose microcrystalline , isodiyam croscarmellose , Isilicon dioxide , wemagniziyam stearate , icarnauba wax , titanium dioxide , polyethylene glycol , i-ferric oxide etyheli , I-D & C Mthubi Nombolo 10 , I-FD & C Mthubi no-6 , hypromelloses
Abavelisi: KVK-Tech, Inc.
Imbuyekezo Marlex Pharmaceuticals Inc.
Imifanekiso edibeneyo ye 'K 7'
IClonazepam (esasazekayo) I-Minocycline Hydrochloride eyandisiweyo-yokuKhutshwa Oxycodone Hydrochloride
ungaxuba ibuprofen kunye neacetaminophen
iziphumo ebezingalindelekanga ze-alendronate 70 mg
Ihlala ixesha elingakanani intsangu kwinkqubo
ungayithatha i-benadryl nge-tylenol